WhatsApp waqti badan ayey siisaa adeegsadayaasheeda si ay u aqbalaan shuruudihiisa: Ilaa May 15 | Androidsis
WhatsApp talaabo yar ayey dib uqaadey si isticmaaleyaasha adeegsada arjiga aad haysato waqti dheeri ah oo aad ku aqbasho shuruudaha cusub. Taariikhda cusubi waxay noqon doontaa May 15 iyo ma ahan Febraayo 8 sidii markii horeba la soo jeediyey toddobaad ka hor iyo in yar.
Shirkadda ayaa sheegtay in tani ay sabab u tahay jahwareer iyo macluumaad khaldan ka dib casriyeyntii ugu dambeysay, sidaas darteed ay u isticmaali doonaan waqtigan inay caddeeyaan waxaas oo dhan. Waxay kuu sharxi doontaa sida asturnaanta iyo amniga ay ugu shaqeeyaan WhatsApp, muddo dheer baa la isweydiinayay.
Bilowgii Janaayo waxay bilaabatay inaad ka soo muuqato WhatsApp farriin ku saabsan shuruudaha cusub iyo siyaasadaha asturnaantaHaddii aadan aqbalin ka hor Febraayo 8, koontada aad isticmaaleysay illaa xilligaas waa la tirtirayaa. Tani waxay ku keentay cabsi gaar ah qaar badan oo adeegsadayaal ah, sidaa darteed inbadan ayaa durba u hayaamaya codsiyada kale.
1 Muxuu yidhi siyaasada cusub ee WhatsApp
Muxuu yidhi siyaasada cusub ee WhatsApp
WhatsApp waxay xaqiijineysaa in siyaasada cusub "aysan waxba ka badalin fariimaha ka imanaya isticmaaleyaasha ama wicitaanada isticmaalayaasha kale ama kooxaha, maadaama shuruudaha aan la beddelin. Farriimaha iyo wicitaannada ayaa sii ahaanaya kuwo sir ah oo laguma keydin doono server-yada shabakadda bulshada ee Facebook.
Kuwo badan ayaa argagaxay ka dib markii farriinta soo-muuqashada ay muuqatay oo qof walba u sheegaysa inuu bilaabo inuu la wadaago xogta Facebook. Dad badan ayaa u qaatay in akoonadooda la tirtiri doono 8-da FebraayoQaar kale waxay go'aansadeen inay u duulaan adeeg kale oo aad u ammaan badan, ugu yeeraan Telegram ama Signal.
WhatsApp talaabadan cusub waxay maamushaa inay lumiso kalsoonidii yarayd ee ay haysatay ilaa hadaWaa codsiga ugu isticmaalka badan, laakiin taasi maahan sababta ay isticmaaleyaashu u aqbalaan siyaasad ay ku soo rogaan xoog. Xaqiiqda kaliya ayaa ah in macluumaadka isticmaalaha sanadihii la soo dhaafay la wadaagay.
Fikradayda waa tallaabada ugu dambeysa ee lagu sharaddeeyo Telegram, codsi bixiya nabadgelyo weyn, looma iibiyo cidna wuxuuna leeyahay astaamo badan oo ka badan WhatsApp. Muuqaal lagu muujinayo waa wadahadalka codka, laakiin maahan kan kaliya, waxaan badbaadin karnaa macluumaadkeena oo waxaan leenahay daruur u gaar ah oo aan ku kaydin karno macluumaadka.
Labadan shay ka sokow, waxaan sidoo kale ku leenahay bots farahayaga, tiirarka aasaasiga u ah wax walba, ha ahaato maareynta kooxaha, helitaanka buug, soo dejiso muusikada iyo waxyaabo kale oo badan. Telegram waa dhowr talaabo ka hor tartankiisa, sidoo kale laga soo xigtay Signal inkasta oo uu doonayo inuu u iibiyo sida "ugu fiican."
Telegram oo ay adeegsadaan in ka badan 500 milyan oo isticmaale waxaa si wanaagsan loo maareeyay tan iyo markii la bilaabay 2013 ilaa maanta. Inta aan la gaarin 15-ka Maajo waxay noqon doontaa wakhti go aan la gaaro, Aqbal shuruudaha faa iidada u leh shirkada gadaasheeda oo muddo dheer lagu ganaaxay ku xad gudubka asturnaanta dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Whatsapp » WhatsApp waxay siinaysaa waqti badan dadka isticmaala si ay u aqbalaan shuruudaha: Ilaa 15-ka Maajo
Chef Ramsey wuxuu ku garaacay Ghanta cunnada 'Chef Blast' ee loogu talagalay midabada iyo walxaha qarxa-3